Fedora Project: Kuziva Yako Nharaunda uye Zvazvino Zvakaitika | Kubva kuLinux
Linux Tumira Kuisa | 13/09/2021 06:00 | Kugoverwa, GNU / Linux
In the Universe yemahara uye yakavhurika mapurojekiti iyo inotenderera yeGNU / Linux uye iyo Yemahara Software uye Yakavhurika Sosi Nharaunda, kune makuru uye makuru mapurojekiti anomiririra kune akawanda akakosha mapoinzi. Semuenzaniso, mumunda we GNU / Linux Kugovera / Nharaunda kubuda kunze Debian, Ubuntu, Mint, Arch uyezve, pakati pevamwe vazhinji Fedora.
Uye ndizvozvo, mukati mezvinozivikanwa "Fedora Chirongwa" pane chikuru uye chinoshamisa Community yakatsaurirwa kwazvo kuvaka inotonhorera zvigadzirwa uye zviwanikwa kune vanhu pasi rese. Uye mune ino posvo tichatora muchidimbu kune mazhinji acho.
Fedora 34 akatoburitswa, ziva kuti chii chitsva
Uye sezvo isiri nguva yekutanga kuti tibate nerumwe ruzivo rwakanangana neiyo "Fedora Chirongwa", isu tinobva tasiya pazasi pehumwe hwazvino maratidziro nezve edu zvakapfuura zvakabatana zvakatumirwa. Zvekuti avo vanofarira kuzviongorora vapedza bhuku iri vanogona kuzviita zviri nyore:
"Iyo yakagadzikana vhezheni yeFedora 34 yakatoburitswa uye yakagadzirira kurodha pasi. Iyi vhezheni nyowani yeFedora 34 inosanganisira akateedzana ekuvandudzwa akakosha ayo anofanirwa kutariswa, nekuti shanduko zhinji dzakanangana nekuvandudzwa kwekuita uye kunyanya zvinongedzo zvehardware.
Semuyenzaniso: Yese odhiyo hova yakaendeswa kuPipeWire media server, inova ndiyo yekumisikidza pachinzvimbo chePulseAudio uye JACK. Uye pamusoro pePipeWire iyo iri pamusoro munzira zhinji, kushandiswa kweWayland kunoonekwawo." Fedora 34 akatoburitswa, ziva kuti chii chitsva
Iyo beta vhezheni yeFedora 34 yakatoburitswa uye idzi ndidzo nhau dzayo
MuFedora vanoronga kuita kupatsanurana voitumidza kuti Fedora Linux
Fedora inosuma Kinoite mubatsiri weSilverblue uye zvakare inoronga kutamira FreeType kuHarBBuzz
1 Fedora Project: Vanhu Nharaunda uye Software Platform
1.1 Chii chinonzi Fedora Project?
1.2 Ndezvipi zviitiko uye zviwanikwa zvaunopa izvozvi?
1.2.1 Main mapurojekiti
1.2.2 Ari kubuda Mapurojekiti uye Anowanikwa Zviwanikwa
Fedora Project: Vanhu Nharaunda uye Software Platform
Chii chinonzi Fedora Project?
Maererano ne zviri pamutemo webhusaiti Del "Fedora Chirongwa", inotsanangurwa muchidimbu se:
"Inovandudza, yemahara uye yakavhurika sosi chikuva chehardware, makore nemidziyo, iyo inogonesa vanogadzira software uye nhengo dzemunharaunda kuvaka zvigadziriso zvevashandisi vavo."
Nepo, gare gare vachiwedzera avo tsananguro uye chiyero zvinotevera:
Iyo Fedora Project inharaunda yevanhu vanoshanda pamwechete kuvaka yemahara uye yakavhurwa sosi software chikuva, uye kubatana uye kugovana mushandisi-centric mhinduro dzakavakirwa pamusoro pechikuva icho. Kana, kungoisa, tinogadzira iyo Inoshanda Sisitimu uye inoita kuti zvive nyore kwauri kuti uite zvinhu zvinobatsira nazvo.
Ndezvipi zviitiko uye zviwanikwa zvaunopa izvozvi?
Pakati pevakawanda izvozvi uye zvazvino zvirongwa uye zviwanikwa, zvakakodzera kujekesa uye nekutsanangura muchidimbu zvinotevera:
Fedora Workstation: Iyo yakavimbika, ine simba uye nyore kushandisa Operating System yemalaptop uye desktops. Yakave yakagadzirirwa kuve inoshanda zvakanyanya kune akasiyana siyana evanogadzira, kubva kune hobbyists uye vadzidzi kune nyanzvi mune zvebhizinesi nharaunda. Iyo inopa iyo GNOME 3 Desktop Nharaunda pamwe chete neyakaunganidzwa yakazara yeakavhurika sosi maturusi.
Fedora Server: Iyo inharaunda inotsigirwa Server Inoshanda Sisitimu, iyo inopa vatungamiriri vane ruzivo mune chero Inoshanda Sisitimu yekuwana kune echizvino matekinoroji anowanikwa mune yakavhurika sosi nharaunda. Pakati pehunhu hwayo hwakakosha ndeyehuremu hwayo hwekuita modularity (kubata kweshanduro dzekushandisa nemitauro yakaiswa).
Fedora IoT (Internet yezvinhu): Icho chinyorwa cheFedora icho chinopa hwaro hwakasimba hweIoT ecosystems. Izvo zvakanaka kune mapurojekiti ane hukama neimba, semumagedhi maindasitiri, akangwara maguta kana analytics ine AI / ML. Uye zvakare, inopa yakavimbika yakavhurwa sosi chikuva pairi kuvaka yakasimba uye nyore-kusimudzira hwaro.
Ari kubuda Mapurojekiti uye Anowanikwa Zviwanikwa
vamwe mapurojekiti uye zviwanikwa zviripo ndezvi:
Wiki: Chishandiso chekubatana chenharaunda yako hombe.
magazini: Inodzidzisa uye nhau webhusaiti yenharaunda yako.
Alt DownloadsChikamu chinopa dzimwe shanduro dzeFedora.
Docs: Chikamu chinounganidza, chepakati uye chinopa zvese zvinodiwa zvinyorwa zvevashandisi.
Spins: Project inopa Editions (Spins) yeFedora munzvimbo dzeDesktop zvimwe kunze kweGNOME.
Fedora Labs: Chikamu chinopa yakasarudzika sarudzo yezvinangwa-zvine chinangwa zvemukati uye mapakeji mapakeji, sekuchengetedzwa uye kuchengetedzwa nenhengo dzenharaunda yeFedora.
CoreOS: Minimalist inoshanda sisitimu, ine otomatiki inogadziridza uye yakatarisana nemidziyo. Chinangwa chavo ndechekupa akanakisa emidziyo yekumhanyisa kumhanyisa akachengetedzwa emabasa zvakachengeteka uye pachiyero.
Silverblue: Isingachinjiki (isingachinjiki) desktop inoshanda sisitimu inoitirwa kupa rutsigiro rwakanaka rwecontain-centric workflows. Izvi zvakasiyana zveFedora Workstation zvinangwa zvekuvandudza nharaunda.
chitsamba: Mune inotevera posvo isu tichaongorora zvishoma nezve Fedora Silverblue.
Mukupfupisa, sezviri kuonekwa, parizvino iyo "Fedora Chirongwa" mhedzisiro inobudirira ye yakanakisa Nharaunda yeVashandisi, Vagadziri uye mamwe mahunyanzvi, akagadzira zvakanakisa zvemahara uye zvakavhurika zviitiko, uye zvinobatsira online zviwanikwa kune chero munhu anozvida uye anozvida.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » Kugoverwa » Fedora Project: Kuziva Yako Nharaunda uye Izvo Zvazvino Zviitiko
Iyo fedora ndeyechokwadi, zvichave izvo kwete. Yakavimbika maererano nekuchengeteka, hongu ndizvo. Asi zvinosuruvarisa mukudzikama, munguva pfupi inotevera kana zvichazokundikana uye zvinokupa matambudziko akakomba, nekuti iwo ane reza-rakapinza kungofanana neaya arch ayo pausingafungire kuti anotsemuka kana kana. Fedora ndiko kwandinoda kugovera, iine super gnome kuti hakuna imwe gnome senge iyo mune yese Linux nyika. Asi sezvo pakupedzisira inoguma ichityora, zvakanaka ini handishandise. Panzvimbo pezvo kuedza kwenyonganiso, muchokwadi ndiko kukuru kusingazivikanwe uye vanhu vanodavira kuti nekuti inonzi kuyedzwa inototyora iwe, hongu iri kuyedza, hahaha, kana iri kuyedza asi ivo vanochengetedza zvakanyanya kupfuura fedora, arch uye kunyange kunakidza . Iwo mapakeji anouya pakuedzwa atove suuuper akaongororwa uye kunyanya anogona kukupa rimwe dambudziko diki, asi hapana chakakomba chaunofanira kudzorera kubva pakutanga, kunze kwekunge iwe uchishandisa kuyedza ne kde uye nvidia saka hongu, zvinokurova zvechokwadi. Ndanga ndichiedza kwemakore matatu uye ndiko kugovera kwakandipa iwo mashoma matambudziko, kunyanya, zero matambudziko, ini ndaive nematambudziko akawanda neyakagadzikana uye yakakomba debian pane kuyedza. Fedora anotyora, arch kana kukuudza uye manjaro zvakare inotyoka. Kuyedza kweDebian, hakutsemuke, kugadzikana mune kwayo yakachena fomu.
Kwaziso, Testingsi. Ndatenda nekutaura kwako uye nekuisa kubva pane chako chiitiko paFedora uye Debian Kwayedza.
Chero ani zvake akamboshandisa Fedora mumakore mashanu apfuura anoziva kuti havana chekugodora Debian mukugadzikana uyezve Arch mukuva neyakagadziriswa system. Uyezve, matekinoroji ekucheka-cheka, ari iwo anoverengwa, angave apfuura kana zvirinani muFedora pane kuArch, nechikonzero chiri nyore chekuti vanobva kuFedora. Kutaurwa kwako hakunei nechinyorwa uye pamwe iwe wakangopinda kuti ugumbure mweya. Fedora Workstation yakagadzikana senge debian isina kushaikwa uye yazvino seye arch isina kuputsa kugadzikana
Chinyorwa ichi chakanakisa uye ndiri kutarisira kuongorora kwe fedora silverblue.
Ndiri Fedora Workstation uye mushandisi weSilblue. Ini ndaimbove mushandisi we debian, openSUSE, Ubuntu, manjaro, arch, ndakagutsikana kuti nhasi, yakanakisa linux distro ndeiyi: Fedora Workstation
@Testingsi, kunyatso kuedzwa kweDebian hakuzivikanwe zvachose, ndinobvuma: vanhu vanoishandisa vasingazive ruzivo. Kana iwe uchitaura nezve kuchengetedzeka kwakanaka muFedora, kwete kugadzikana, kuyedzwa kwaDebian kunotambura nekushayikwa kwezvose zviri zviviri, kune rumwe rutivi zvigadziridzo zvekuchengetedza zvinouya * kanenge * pasvondo mushure mekugadzikana (dzidza bhuku rekudzokorora pamatanho epakeji mukuyedza), saka unogona kuve wakakwana mwedzi yakati wandei neFirefox yakapera kana chero chakakosha pasuru chakaputswa nekuda kwayo gadziriso mutemo, unogona kuita pinning apo pasina vhezheni yekupokana, uye isu tatoziva matambudziko ekusunga anounzwa neshanduro yemahara software yekuvandudza modhi.
Kwaziso, Autopilot. Ndatenda nekomendi yako uye mupiro.
Vakawana kunetseka muGhostscript iyo yaishandiswa kuburikidza ne ImageMagick
GNOMEApps1: Iyo GNOME Nharaunda Core Zvishandiso